Ahoana ny fomba hanafenana ireo entana ao amin'ny menio System Prefers | Avy amin'ny mac aho
OS X dia niavaka hatrany ho rafitra fiasa tena tsotra hikirakira, na dia ny fanovana farany an'ny Windows 10 aza dia nanatsara be indrindra io lafiny io sy lasa nanjary mora kokoa ny manamboatra sy miasa. Na eo aza izany, isaky ny miditra amin'ny safidin'ny rafitra isika dia afaka mahita sary masina marobe izay tsy milaza amintsika na inona na inona, satria fantatsika fa tsy hampiasa azy ireo velively isika ary ny zavatra rehetra ataony dia mikorontana isaky ny miditra ao amin'ny menio System preferences an'ny Mac misy OS X.
Soa ihany fa tsy sahala amin'ny Windows, OS X mamela antsika hanamboatra ireo singa tianay hiseho ao anatin'ity menio ity. Raha te hikirakira izay singa tiana hiseho ao anatin'ny menio Preferensi dia tsy maintsy manatanteraka ireto dingana manaraka ireto ny rafitra:
Afeno ireo singa amin'ny menio ao amin'ny System Preferences
Voalohany, mandeha any amin'ny Menio Preferensi System.
Raha vantany vao nosokafana dia mankany amin'ny bokotra akaikin'ny bokotra izay mamela antsika hivezivezy amin'ny menio teo aloha sy manaraka isika. Ity bokotra ity dia soloin'ny a Isa 12 miparitaka amin'ny tsipika telo sy tsanganana efatra.
Mba hahafahana manamboatra ireo singa aseho dia tsy maintsy manindry sy mitazona ny totozy amin'io bokotra io isika ary hikorisa amin'ny faran'ny menio mba hisafidianana ny safidy personalize.
Ho hita eto ambany ny kisary ao amin'ny menio System Prefers misy boaty manga, izay hanondro izay rindranasa aseho izao. Raha te hanafina ny iray amin'ireo rindranasa isika dia mila ariana fotsiny ireo boaty amin'ireo rindranasa izay tiantsika hampijanonana.
Raha vantany vao tsy voamarina ireo fisoratana anarana hanafenana dia tsy maintsy tsindrio ilay Bokotra OK ka miafina ireo singa vaovao ary zaraina indray ireo singa ambiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Fanafenana ireo entana ao amin'ny menio System Prefers
Apple Music dia hiova kely aorian'ny WWDC Jona